Beagle siri ike bụ onye mgbapụ kachasị mma? - Reeddịrị
Beagle siri ike bụ onye mgbapụ kachasị mma?
Beagle na-atọ ụtọ, nke mara ezigbo mma bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike.
N'iji arụ ọrụ rụrụ arụ, obere ìgwè a nwere ike ịbụ ezigbo aka iji biri ma nye nkịta a oge na ume, ma ị ga-enwe obi ụtọ mgbe niile.
Chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Beagle dị n'okpuru, site na otu kachasị mma iji lekọta nwa bekee a na-egwuri egwu na ihe ị ga-atụ anya na nsogbu ahụike.
Ebee ka Beagle si malite?
Kedu ihe ugo bekee yiri?
Ndi Beagles bu ezigbo nkita ezinulo?
Otu esi elekọta Beagle gị
Olee nsogbu ahụike Beagles nwere?
Ego ole ka Beagle na-eri?
Uzo ndi ozo di iche na Beagle
Ngwakọta Beagle na-ewu ewu
Onye kwesiri inweta nkịta Beagle?
Ugo nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke malitere na 400 B.C. mgbe akpọrọ nkịta yiri Beagle na akwụkwọ Greek.
Fọdụ kwenyere na obere nkịta ndị a na-achụ nta ahụ ha na ndị Rom rutere United Kingdom, mgbe ahụ ha jiri anụ egbe ha zụọ nkịta ha.
A na-echekwa na ịnyịnya Talbot wetara Great Britain nke William onye mmeri na 1066 n'oge Norman Conquest nwere ike ịbụ nna nna Beagles.
Dị ka akụkọ mmalite nke ụdị a, mmalite nke okwu Beagle bụkwa nke a na-ejighị n'aka.
Ọ sitere na begueule ma ọ bụ beugler, okwu French maka emeghe akpịrị na bellow, Old English ma ọ bụ Celtic okwu beag, nke pụtara obere ma ọ bụ German maka ịba mba, begele.
Otu ihe doro anya bụ na obere beagle bụ ndị ama ama na England n’oge ọchịchị nke Henry VII na Edward II.
A makwaara ya dịka Gloag Beagles, obere nkịta ndị a nwere ike ịdaba n'aka aka aka ebe a na-amakwa mkpọtụ na-ada ụda na-adị n'oge a. Elizabeth I nwekwara obere beagle, akpọrọ Poag Beagles.
A pụrụ ịhụ Poag Beagles na eserese dị iche iche ma jiri imi na ụkwụ dị mkpụmkpụ mara ha nke ọma.
Naanị ihe ha mere bụ sentimita iri abụọ na atọ n’ogologo, bụrụkwa nkịta na-achụ nta a na-ewu ewu, ma, ọ naghị eme ngwa ngwa n’ihi obere ụkwụ ndị ahụ.
Ka ọ na-erule afọ 1700, Beagle adịchaghị ewu ewu na United Kingdom ka eji Foxhounds eme ihe maka ịchụ nta.
Otú ọ dị, ndị ọrụ ugbo ole na ole ji Beagles chịa rabbits na hares jisiri ike mee ka ụdị anụ ahụ dị ndụ.
N'ime 1800s, Reverend Phillip Honeywood zụlitere Beagles maka ikike ịchụ nta ha.
N'ụzọ dị iche, otu nwa amaala Britain, Thomas Johnson, zụkwara nkịta ndị a maka nkà ịchụ nta ha na akụkụ ndị mara mma. Echere na nkịta ndị a mụrụ beagle nke oge a dịka anyị si mara ya taa.
Ndị American breed wee bubata beagles ndị a mara mma na United States, na-azụ Beagles n'okpuru ịdị elu nke 15 ruo 17 sentimita asatọ (38 ruo 43 cm) ka ha wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị maka ịchụ nta oke bekee.
Otu ụdị Beagle dị na New York, nke Willet Randall mepụtara, bịara bụrụ nke a maara dị ka Patch Beagle n'ihi oke ntụpọ ya nwere agba atọ.
The Patch Beagle bụ ngwa ngwa ma si otú a ihe magburu onwe scenthound maka nsuso obere egwuregwu , na-eduga na mmụba nke nkịta a na-ewu ewu n'etiti 1940s na 1950s.
Ọbụna taa, ha dị n’etiti ụdị ise kacha ewu ewu na United States.
E bidoro klọb Beagle mbụ na 1884, na otu afọ ahụ, American kennel Club malitere ịdenye aha ahụ dị ka onye so na otu nkịta nkịta.
Na 1916 ndị otu Egwuregwu National Beagle zụrụ ala na Virginia ebe enwere ule ule iji nwalee nkịta ndị a ịchụ nta.
Ulo oru National Beagle Club's Institute Farm ka na-ejide ule ule AKC a kwadoro rue ubochi a na otutu ndi ozo na egwuregwu Beagle.
Untingchụ nta dị nnọọ mkpa na ụdị a na AKC Beagle ọkọlọtọ ọkwa gụnyere ngalaba na beagle packs na nna ukwu na hound agba na uwe.
Ọbụna taa, Beagles bụ nke a na-ejikarị dịka nkịta ịchụ nta ebe ị nwekwara ike ịchọpụta ụdị a na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọelu.
A na-ejikarị beagle elele ebe a na-azọrọ ibu, na-achọ ihe iwu na-akwadoghị na nri, ngwa ọgụ, na ọgwụ ọjọọ n'ọtụtụ ebe ntinye na United States, gụnyere ihe karịrị ọdụ ụgbọ elu mba iri abụọ.
Ndị nkịta a egosiwo nhọrọ ziri ezi maka ọrụ a n'ihi na ọmarịcha mma ha, omume enyi anaghị atụ ndị njem ụjọ ma ọ bụ menye ha ụjọ dịka nkịta ka ukwuu.
Fọdụ Beagles a ma ama gụnyere Snoopy na ahụekere ahụekere nke Charles Schulz mepụtara. Onye a hụrụ n'anya Snoopy nwere ọrụ dị mkpa ọ ga-arụ na ụdị ewu ewu Beagle.
Ezigbo ndụ Beagles gụnyere Uno na Miss P, Beagles abụọ meriri Best na Show na televised Westminster Kennel Club mere na 2008 na 2015, n'otu n'otu.
Onye isi ala Lyndon B. Johnson nwekwara Beagles atọ, aha ya bụ Edgar, Him, na Her, o butere nnukwu esemokwu mgbe a hụrụ ya ka ọ na-atụtụ otu nkịta ya na ntị ya.
A kpọkwara ụgbọ mmiri Charles Darwin HMS Beagle mgbe ìgwè a na-ewu ewu.
Beagles bụ obere nkịta, mana yana a muscular, siri ike ahu , na-achọ ihe dị ka obere Foxhound. Ha nwere igbe di omimi nke nwere azu azu, udi onyonyo, na odu di ogologo nke ana efopu site na ala ma odighi agbachi ya.
Ihu ha domed na akp na a square ọkara-ogologo muzzle na nwa imi na n'oghere imi, na nnukwu hazel ma ọ bụ aja aja anya na-arịọ arịrịọ na ezigbo mma 'nwa nkita-nkịta ’anya.
A na-agbadata obosara, penti na-eju ike, na-akpụkwa ihu.
Na ihe kachasị mkpa na ihu ha bụ imi, nke nwere ihe karịrị nde mmadụ 220 na-esi ísì ụtọ, ma e jiri ya tụnyere nde mmadụ ise.
Ọ pụtara na a na-ahụ Beagle na isi ya ala, na-agbada n'ala, na-eso imi ya ka ọ na-eburu isi ọma dị iche iche.
Beagle nwere otu n'ime isi mmetụta kachasị nke isi na nkịta, n'akụkụ ya Ọbara ọgbụgba na Basset Hound .
Kedu ka nnukwu Beagles si buru ibu?
Agụ dị obere, nkịta kọmpat na dị n'agbata kilogram 18 na 30 (kilogram 8 na 14), na ụmụ nwanyị na-abata n'agbata kilogram 20 na 22 (9 na 10 n'arọ) na ụmụ nwoke na-adịkarị kilogram 22 ruo 24 (kilogram 10 ruo 11).
E nwere Beagles abụọ dị iche iche nke ndị America kennel Club na-amata site n'ịdị elu ha.
Varietydị nke mbụ bụ maka nkịta pekarịrị 13 sentimita 33 n'ubu, na ụdị ndị ọzọ bụ maka nkịta na guzo n'etiti sentimita 13 na 15 (sentimita 33 na 38) .
Dogsmụ nkịta ndị toro ogologo dị ka obere ka ọ dị n’agbata Pound 15 na 18 (kilogram 7 na 8) .
Onweghi Beagle nke anabatara site n'ụkpụrụ dị iche iche, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ezo aka na 13-anụ ọhịa Beagle dị ka a N'akpa uwe ugo .
Mana n'ihi obere obere ha na ọdịdị dị nro, Beagles bụ ọnụ ntụ dị mma maka ọtụtụ gburugburu , ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-akwagharị ọtụtụ ma ọ bụ na-ebi n'ụlọ ma ọ bụ ogige.
Agụ dị atụle zuru oke na ọnwa 18 . N'oge a, a na-emepụta usoro ọkpụkpụ ha.
Uwe na agba nke ụdị Beagle
Ọ bụ ezie na ụdị ọkọlọtọ AKC maka Beagles kwuru na enwere ike ịchọta nkịta ndị a na agba ọ bụla hound, ndị ụdịdị kachasị dị iche bụ ụdị agba agba atọ nwere akara ojii na akara ọcha na igbe, afọ, ụkwụ, na ọdụ ọdụ.
Uhie Beagles na-acha ọcha na nke nwere ụkpụrụ a na-ahụkarị.
N'agbanyeghị agba ọ bụla a na-ewere dị ka ihe dị mma, naanị Beagles na-egosipụta otu n'ime agba iri na otu ga-ekwe ka isonye na asọmpi na ihe ngosi nke AKC na-agba.
A na-ahọrọkarị ugo nwere agba dị iche iche na-akwadoghị, dị ka agba agba atọ.
Beagles na-acha uhie uhie na-abụkarị lemon na ọcha ma ọ bụ ọbara ọbara na ọcha na-enweghị akara ojii, ebe njikọ ndị ọzọ gụnyere nwa, aja aja, ọcha, ọbara ọbara, ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ.
A na-ahụkwa ugo nke nwere flecks ma ọ bụ speck, dị ka nke Redtick ma ọ bụ Bluetick Coonhound. Enwere ike ịchọta sadulu n'ime imeju ma ọ bụ ọbara ọbara-acha aja aja, yana acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ anwụrụ ọkụ.
N'agbanyeghị uwe ha na-acha, Ugo na-acha ọcha n’elu ọdụ ha, nke n’enyere ha aka ebe ndi dinta huru ha mgbe ha gbara oso ogologo.
Uwe a na-enyo enyo bụ nke ọkara ogologo ma sie ike ma chebe nkịta ndị a site na ahịhịa. Ọ na-eguzogidekwa mmiri ozuzo ma dị mfe ilekọta ma debe.
Obi ụtọ, nkịta hụrụ n'anya, Ugo na-eme ezigbo enyi n'agbanyeghị ezinụlọ gị. Ha bụ nkịta na-arụsi ọrụ ike nke ọma maka ndị na-alụbeghị di na nwunye na ndị hụrụ n'anya n'èzí.
Ọ bụ ezie na obere obere ha ma sie ike na-ewu ụlọ na-eme ka ha bụrụ ezigbo ndị enyi maka ụmụaka, ọbụlagodi ndị agadi ga-ahụ ìgwè a n'anya bụ ndị na-echeghị iji nwayọọ na-eje ije ebe ha nwere ike ịmị ọkụ ruo mgbe obi ha nwere afọ ojuju.
Ọ bụ ezie na-apụ apụ n'okike na egwuregwu isonyere na ihe ọ bụla njem, Beagles bụkwa incredibly dị nwayọọ ma na-anabata ihe .
Bredị nkịta a nwere njikọ maka ụmụaka, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịpụtụ ntakịrị na oke ọnụ, na-eji ọnụ ha egwu egwu, n'ihi ya, ọ nwere ike ịdị ha mkpa ka ụmụ obere ụmụaka lekọta ha anya.
Na nloghachi, Beagle gị nwekwara ọtụtụ ịhụnanya ịkọrọ. Dika anumanu ndi a na-achikota, nkita a gha abia onwe ha na ngwugwu ha ma na-achu ha enyi site na mmadu na nkita ndi ozo.
Ha n'ozuzu ha na onye obula ma na-egbukwa enyi, ma a na-ahuta anu ulo, dika nwamba na oke bekee ka ha buru anu oriri ma di ya.
Kedu nsogbu Beagles nwere?
Ha dị ezigbo ụtọ ma nwee ọ thatụ na Beagles anaghị eme ezigbo nche ka ha na-abụkarị ndị enyi.
Otú ọ dị, ihe nke a pụtara bụ na Beagles nwekwara ike ịgwụ ike ngwa ngwa ma ọ bụrụ na a hapụrụ naanị ha na-enweghị mkpakọrịta ọ bụla ogologo oge, nke nwere ike ibute omume mbibi ka Beagle gị na-agba mbọ ịchọta ụzọ iji maa onwe ya ọchị.
Nke a nwere ike ime ka ha gwuo ala, tie mkpu, ma ọ bụ gbalịa ịgbanahụ mgbe ị na-ata ahụhụ site na ichegbu onwe. I nwedịrị ike ịhụ nkịta gị ka ọ na-eri nri mgbe ọ gwụrụ ma ọ bụ chọọ nlebara anya.
Site na steak nọọrọ onwe ya, Beagles nwere ike ịbụ aghụghọ ịzụ . A na-akwado ọzụzụ nrubeisi nke ọma iji hụ na okwu gbasara omume dịka snapping, barking, na ụta adịghị aghọ ebe nkịtị.
Ikwesiri iji usoro nkuzi okike di iche iche iji mee ka uche Beagle nwee obi uto nke oma dika nri site na udiri a.
Nkwado dị mma bụkwa ụzọ magburu onwe ya isi gaa dịka Beagles ga-akwụsị ma ọ bụrụ na a gwọọ ya. N'otu oge ahụ, ndị nwe ha ga-ahụkwa na ha gosipụtara onwe ha dịka onye ndu na-achị achị.
Nkuzi ọzụzụ site na nwata a na-atụ aro ya na Beagles, ọtụtụ ndị nwe Beagle na-ekwu na ọ nwere ike iwe otu afọ iji zụọ ụlọ a n'ụzọ zuru oke.
Ihe ọzọ ị ga - amata na Beagles bụ na ọ bụ ezie na ha abụghị nkịta nkịta, A maara ugo na-eme mkpọtụ !
Nkịta ndị a nwere mkpọtụ dị iche iche dị iche iche ha na-emekarị, ogbugbo, iti mkpu, na ọkara mkpu, ọkara na-ada ụda mkpọtụ ha na-ejikarị eme ihe mgbe ha hụrụ anụ oriri ha mgbe ha na-achụ nta.
Gee ọtụtụ olu nke Beagle na vidiyo a mara mma:
Nkịta siri ike nke nwere mfe ilekọta uwe na ọdịdị ịhụnanya, enwere ihe kpatara Beagles na-atụle mgbe niile dị ka otu n'ime nkịta ndị kachasị ewu ewu gburugburu.
Ọ bụrụ na e nyere ha nlebara anya na mmega ahụ ha chọrọ, Beagles bụ ndị enyi na-arụ ọrụ nke nwere ike ijikwa gburugburu dị iche iche.
N’agbanyeghi na dika ha nwere obi uto n’ebe ana-azu umuanu dika n’obodo, nkita ndia kwesiri ibi n’ulo ha na ezi na ulo ha adighi ha nma ibi ndu na ulo nkita.
Kedu otu mmega ahụ Beagle chọrọ?
Beagles nwere ogo dị elu ma dị elu ma chọọ ọtụtụ mmega ahụ, tinyere ijegharị ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, maka ihe dị ka nkeji 30 ruo elekere na mkpokọta.
Dika uchu ichu nta ndi a di obi uto mgbe ha na - esote isi, jide n'aka na idebe Beagle gi mgbe nile mgbe ha na - aga ije dika ha na - agbaghari ngwa ngwa, na - eso imi ha.
Mgbe Beagle na-enweta ahụhụ nke ísì ụtọ na-adọrọ mmasị, ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ dị adị.
Beagles ga-enwekwa ọ joụ dị mma ma jide n'aka na ị gaghị eme mmega ahụ dị ka nke a ruo mgbe ọnwa 18 gachara mgbe nkịta gị tozuru oke.
Nkịta ndị a na-emekwa nke ọma n'ihe omume ebe ha nwere ike itinye amamihe ha n'ule ahụ, gụnyere ịchụ nta na nnwale n'ọhịa, mgbako, nrube isi, na ọfụma ọzụzụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta nkịta na-egwu mmiri, mgbe ahụ Beagle abụghị nhọrọ kachasị mma maka gị. Dogsfọdụ n'ime nkịta ndị a ga-eme ihe niile ha nwere ike ime iji zere mmiri.
Ogige a gbachiri ogige ga-enyekwa ohere dị nchebe ebe Beagle gị nwere ike igwu ma chọpụta n'èzí n'agaghị efu. Nkịta gị ga-emekwa enwe na-egwuri egwu nsuso na senti dabeere na egwuregwu gị na yad.
Older Beagles nwere ike ịdị umengwụ ma nwee ọ happyụ na ha na-agha ụgha ụbọchị niile mana ijide n'aka na ị na-arụ ọrụ ụdị a n'ihi na ha nwere ike ibute oke ibu.
Beagles bụ hypoallergenic?
Beagles wụsara mgbe niile, ma uwe elu ha pụtara na ọ bụghị nke ọhụụ dị ka ụdị ụfọdụ ndị ọzọ ma dị mfe ilekọta.
Site na mgbanwe nke oge, ọkachasị na oge opupu ihe ubi, ha ga na-akwafu karịa ka ha na-tufuo uwe elu oyi ha, mkpa ha ga-abawanye n'oge a.
Ihicha Beagle gị otu ugboro n'izu iji mkpuchi hound ma ọ bụ bristle ọkara ga-enyere aka wepụ ntutu isi ọ bụla nwụrụ anwụ ma gbaa ume mkpuchi dị mma.
Hingsa ahụ dị mkpa naanị mgbe ọ ruru unyi ekwesịrị ime ya na ncha dị nro ma ọ bụ ncha ntutu, ma gbaa mbọ hụ na ị na-enyocha ntị nke Beagle gị oge niile n'ihi na nti ntị ha nwere ike ibute ọgbụgba nke waks na ntị.
Mmiri na mmanụ ekwesịghị ịbanye na ntị, ma payaa ntị ma ọ bụrụ na Beagle gị na-akọcha ntị ya mgbe niile ma ọ bụ na-efufe isi ya.
Nakwa, jide n'aka na ị na-ehichapụ ezé nkịta gị ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu iji gbochie ịmalite tartar na nje bacteria mgbe ị na-egbutu osisi kwesịrị ka eme ya mgbe niile.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnụ mbọ nkịta gị na-agbanye n'ala, nke a pụtara na ha toro oke ogologo.
Ego ole ka m kwesịrị ịzụ Beagle?
Beagle bụ otu ìgwè nke lekwasịrị anya na nri. Nkịta ndị a nwere mmasị iri nri ma ga-eri oke nri ma ọ bụrụ na enye ha ọkara ohere.
Ha maara nke ọma na ịchọta nri nke na ha ga-amalite ohi, na-awakpo ebe ị na-eri nri na ihe mkpofu ma ọ bụrụ na ịnweghị nyochaa ha.
Gbalịsie ike idobe bins gị na kọbọd gị niile nke ọma na ụmụaka ga-ekpo ọkụ ka ha ghara ịna-akwa gị Beagle nri.
Nakwa, kpachara anya iji nyochaa ọnụọgụ nri ị na-enye Beagle kwa ụbọchị ma belata ọnụ ọgụgụ ọgwụgwọ. Maka ọzụzụ, nọgidesie ike na obere ọgwụgwọ na-abụghị nke biscuits.
Ogologo nri a na-atụ aro kwa ụbọchị maka ụdị a bụ ụzọ atọ ruo otu iko na ọkara nke nkịta nkụ na-ekesa n'etiti nri abụọ .
Dị ka ezigbo ìgwè na-arụsi ọrụ ike, Beagles nwere ike irite uru na ụdị egwuregwu dị elu nke ụdị nri mana jide n'aka na gị na onye nlekọta anụ gị ga-atụle nke a.
Ugo nwere ka ndu ndu n’agbata afọ iri na iri na ise .
Fọdụ nsogbu ndị nwere ike ịmetụta nkịta gị gụnyere ọrịa intervertebral disk, patellar luxation, distichiasis, hypothyroidism, na chondrodysplasia, nke a makwaara Belar dwarfism .
Ọzọkwa, Beagles na-ebute ọtụtụ ọrịa anya dị ka cataracts, anya cherry, atrophy retinal na-aga n'ihu, na glaucoma, a makwaara ụfọdụ ahịrị na-ebute ọrịa na-efe efe na ọbụna ọrịa obi.
Ọnọdụ ndị ọzọ a na - ahụ mgbe ụfọdụ gụnyere hemophilia, ntị chiri, Musladin-Lueke Ọrịa , a makwaara dị ka Ọrịa Beagle China , mast cell etuto, na eriri nwa hernias.
Mgbe ịzụrụ nwa Beagle nkịta, ị kwesịrị ị nweta ụfọdụ ikike ahụike.
Ndị a gụnyere otu maka dysplasia hip na ikpere dysplasia (nke nwere akara ziri ezi na nke elu), hypothyroidism.
Na ọrịa Von Willebrand na ọrịa anya site na Orthopedic Foundation for Animals, ọzọ maka thrombopathia si Mahadum Auburn.
Nwere ike ịlele asambodo ndị a site na ịchọ nkịta na Ntọala Orthopedic maka ebe nrụọrụ anụmanụ .
Beagles na - enwekarị nkịta n'etiti abụọ na iri na anọ, nke nwere ọtụtụ akwụkwọ asaa.
Beagle puppy na onye na-azụ ihe na-akwụkarị ụgwọ n'etiti $ 800 na $ 1,500 , mgbe Beagles na ebe a na-anabata ụmụaka nwere ike ịga ihe dịka $ 50 na $ 250.
Ọtụtụ ihe ga - emetụta ụgwọ nwa nkita Beagle, gụnyere ọnọdụ, ahụike, aha ndị na - azụ atụrụ, na agbụrụ nne na nna. Beagle sitere na usoro agbụrụ na-efu ihe ruru $ 6,000 .
Oge nke afọ ị na-achọ nwa nkita Beagle ga-emetụtakwa ụgwọ nkịta ahụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ nkịta n'oge ọkọchị mgbe ogologo ụbọchị na ihu igwe ka mma pụtara na ha nwere ike iwepụtakwu oge n'èzí na-azụ nkịta ha ma na-egwu nkịta.
Ya mere ịnweta nkịta n'oge oyi nwere ike ịpụta na ịchọta otu maka ọnụahịa dị ala.
Ọzọkwa, agba Beagle ga-emetụta ọnụahịa ahụ, na agba a kapịrị ọnụ na-achọkwu ihe.
Agbanyeghị, dọọ aka na ntị maka ndị na-azụ Beagle na-anwale ma nye ndụmọdụ ụdị agba dị obere, na-etinyekarị akara na nkịta ndị a. Ọzọkwa, kpachara anya maka nkịta ndị dị oke ọnụ ala n'ihi na ndị a nwere ike si na igwe nkịta.
Ekwesịrị ịdenye ụmụ nkịta Purebred Beagle na American kennel Club na ndebanye aha ndị na-efu ihe dị ka $ 100 na $ 200, ọ bụ ezie na ndị na-akọ akụkọ a na-akọ akụkọ ga-agụnye nke a na ego nke nwa beagle gị.
Nkịta a na-edeghị aha na-adị ọnụ ala mana jide n'aka na ị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ụlọ na onye na-azụ ya.
Ọnụ ego ndị ọzọ nwekwara ike ịdakọ, na-efu ihe ruru $ 1,700 kwa afọ iji lekọta nkịta gị . Microchips dị mkpa maka ụdị a n'ihi ọchịchọ ha ịgbanahụ, ebe ndị ohi hụkwara ohi Beagles n'anya.
Otu microchip ga - eme ka ị laghachite n’etiti $ 25 na $ 50, ebe nri nkịta nwere ike ịdị ihe ruru $ 55 - $ 100 kwa ọnwa na mkpuchi ahụike anụ ụlọ banyere $ 34 na $ 51 kwa ọnwa.
Dị ka nkịta nwere ọgụgụ isi na-ahụ oge egwuregwu ma na-agagharị, ị ga-azụta ụdọ na olu akwa na ọtụtụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu na egwuregwu mgbagwoju anya iji mee ka Beagle gị nwee obi ụtọ.
Ndị na-azụ ihe: ingchọta ụmụ nkịta Beagle maka ọrịre
N'ihi na ụdị ewu ewu Beagle, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịchọta nkịta ndị a n'ụlọ ahịa anụ ụlọ, ọ bụ ezie na ọtụtụ steeti amachibidoro ire nkịta na ụlọ ahịa anụ ụlọ na America.
A breeder breed will be able to give you details about your puppy's lineage and pedigree and, Ya mere, ahụ ike nke gị nwa nkita.
Chọọ onye na-azụ ihe na Breeder of Merit baajị site na AKC dịka naanị ndị ọrụ ama ama ama ama gosipụtara akara ngosi a, nke na-amata ndị na-aga n'elu na gafee.
Na UK, ndị na-azụ ihe dịka nke a ga-abụ nke Mmemme Nlekọta Aka.
Ndị na-azụ atụrụ agaghị erere gị nwa nkita na-eto eto karịa izu asaa.
Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ Beagle bara uru iji bido ịmalite ịchọ Beagle nwa nkita ịkpọ onwe gị:
L.T. Ugogbe , New Smyrna Beach, Florida
Nkume Beagles , Midwest
Nnapụta / maka nkuchi
N'ụzọ dị mwute, a na-ahụkarị Beagles na nlekọta nke nnapụta ma ọ bụ ebe nnabata na-achọ ezigbo ụlọ.
Otu n’ime ihe ndị kacha agbapụta mgbapụta bụ nke ndị nwe ha nyefere bụ mkpu ha na-eme mgbe niile, nke na-akpasu ndị agbata obi ha iwe. Beagles bụ otu n'ime ndị na-azụkarị azụ na ebe obibi.
Ndị a bụ ụfọdụ ndị ọrụ nnapụta beagle kapịrị ọnụ ịchọọ maka Beagle na-achọ ikuchi:
Nnapụta SOS Beagle , New Jersey, New York, Pennsylvania, na Tennessee, Alabama
Ebe Ọwụwa Anyanwụ Cascade , Portland, OR
Nnapụta Tampa Bay Beagle , Tampa, FL
Midwest Beagle Nnapụta , Midwest
Udiri anumanu ndi ozo di ka Beagle n'ihi na ha nwekwara ndi nwere ihunanya, ndi enyi na ndi ezin'ulo tinyere na onodu ike.
Fọdụ n'ime ụdị ụdị ụdị ụdị a gụnyere:
Greyhound nke Italiantali
E nwere ọtụtụ obe Beagle a ma ama n’ebe ahụ. Offọdụ n'ime ndị a gụnyere Beagle na-agafere ya na obere ụdị anụmanụ ndị yiri ya ma ndị ọzọ jiri nkịta buru ibu gafee Beagle.
Beagle ụlọ nyocha (AKA Beagador)
Zute Willow, nkịta Beagador - Isi ihe onyonyo
Na Beagador bụ otu dị otú ahụ trendy mbuaha ìgwè. Obe a bụ ngwakọta n’etiti Beagle na Labrador.
Ngwakọta Beagle Lab bụ nkịta na-ajụ ase, nke yiri nke Beagle n'ogologo, mana ya na anụ ahụ elongated.
Ọdịdị zuru oke na crossbreed ọ bụla ga-adịgasị iche dabere na ụdị nne na nna, mana ọ bụkarị, Beagador ga-enwe uwe mkpụmkpụ nne na nna nke Labrador Retriever.
Otú ọ dị, agba ga-abụ ihe a na-ejighị n'aka n'ihi ọtụtụ agba Beagle na-egosipụtakarị.
Ọbụna n'otu obere ụmụ nkịta Beagador, ị nwere ike ịnwe aja aja, ojii, odo, ma ọ bụ agba agba atọ. Hụnanya ịhụnanya nke Beagle Lab mix bụ ihe mere nkịta a ji bụrụ onye a ma ama.
Ngwakọta a Beagle hụrụ nlebara anya na ezinụlọ ha, mana dị ka ngwakọta nke ụdị ike abụọ dị elu, ha na-enwe mmasị igwu egwu ma chọọ obere mmega ahụ.
Izute Elvis, a Beabull (Beagle English Bulldog Mix) - Isi ihe onyonyo
Ngwakọta ọzọ Beagle na-ewu ewu bụ Beabull . Obe n'etiti Beagle breed na English Bulldog, ngwakọta a na-egosipụta ahụ dị mkpụmkpụ ma sie ike nke English Bulldog ma bụrụkwa ụdị ọkara.
Gwakọta Beagle na English Bulldog na-enyere aka ịmepụta nkịta dị ogologo, wee si otú a na-ezere ụfọdụ nsogbu iku ume metụtara English Bulldog.
Omume ha jikọtara ụfọdụ àgwà kacha mma nke Beagle na English Bulldog. Na-elekọta mmadụ na ịhụnanya, ịhụnanya Beabull ezigbo cuddle.
Agbanyeghị, n'ihi anụ ọkụkọ anụ ọkụkụ nke Beagle, enwere ike ịnwe oge mgbe ha nwere ike ike ma chọọ oge egwuregwu na-arụ ọrụ.
O bu ihe nwute, dika nkpuru nke nne na nna di isi ike, The Beagle English Bulldog mix nwere ike isiri gi ike ịzụ, ya na oke ochicho obi ojoo.
Ọ bụ ezie na ha na-elekọta mmadụ, ha nwekwara ike ichebe ezinụlọ ha ma, na-ekele nne na nna Beagle, ọbụnadị ezigbo olu.
Beagle Cavalier King Charles Spaniel mix (AKA Beaglier).
Zute Lola, onye Beaglier - Isi ihe onyonyo
Otu n'ime ngwakọta Beagle kachasị amasị anyị bụ Beaglier . Gaa na Beagle na Cavalier King Charles Spaniel, ị ga-enweta nke a mara mma, kọmpat crossbreed.
Nkịta ndị a mara mma nọ n'akụkụ pere mpe ma nwee ọtụtụ agba, na-abụkarị agba abụọ ma ọ bụ ọbụna nwere agba atọ. N'adịghị ka Cavalier King Charles Spaniel, uwe dị mkpụmkpụ ma na-egbuke egbuke nke Beaglier dị mfe.
N'ịbụ onye nwere mmetụta ịhụnanya na onye na-eguzosi ike n'ihe, ngwakọta nke Beagle Cavalier King Charles Spaniel nwere ike ịdị ka ọ na-adị mgbe niile maka nnabata. Mgbe enyi na enyi, ọ yikarịrị ka nkịta ndị a siri ike ọ ga-ahọrọ oge egwuregwu dị mma.
Agbanyeghị, ihe obe a na-enweta bụ ịkpa agwa ọma, ọbụlagodi nke mmụọ spaniel nke na-enyere aka ịchụda nnukwu anụ oriri nke Beagle.
Ndị a bụ ụfọdụ ụdị anumanu Beagle ndị ọzọ ama ama:
Ngwunye Beagle mix (AKA Boggle Nkịta)
Ọ bụrụ na ị dị njikere igbo mkpa uche ha na nke anụ ahụ ha ma nye ọzụzụ zuru oke iji chịkwaa ịba ụba na mkpu ha, Beagle nwere ike ịbụ ụdị nkịta dị jụụ na otu n'ime ndị kachasị mma n'ụwa.
Gosi na ibu onye ndu, a ghaghi inye gi nkita di uto.
Be nwere Beagle? Ka anyị mara na ihe ndị dị n'okpuru.
Arụrụ Dog Shampoo: 4 DIY Ezi ntụziaka si Dog Groomer
Pitbull Husky Mix Ozi: Ihe Banyere Pitsky
ego ole ụmụ nkịta ụlọ nyocha ọlaọcha na -efu
ọlaedo retriver German shepard mix
ụlọ nyocha chocolate na ngwakọta rottweiler
nkịta nwere ike iri anyụ